एमसिसि बि'रोध गर्दा ज्या'न मा'र्ने ध'म्की ? हेमन्तले भने : हो ज्या'न जानपनि सक्छ , तर ड'र छैन (भिडियो हेर्नुहोस) - Public 24Khabar
Home News एमसिसि बि’रोध गर्दा ज्या’न मा’र्ने ध’म्की ? हेमन्तले भने : हो ज्या’न...
एमसिसि बि’रोध गर्दा ज्या’न मा’र्ने ध’म्की ? हेमन्तले भने : हो ज्या’न जानपनि सक्छ , तर ड’र छैन (भिडियो हेर्नुहोस)
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग मंगलबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्।
नेता नेपाललाई भेट्न माओवादी अध्यक्ष दाहाल र जसपा अध्यक्ष यादव कोटेश्वरस्थित उनकै निवासमा पुगेका थिए। नेता नेपाल निवासमा बिहान भएको छलफलमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, मन्त्रिमण्डल विस्तारलगायत विषयमा विचार विमर्श भएको बुझिएको छ ।
यद्यपि भेटका सम्बन्धमा दुबैतर्फका नेताले सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यता जसपाका कार्यकारिणी समितिका सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले अध्यक्ष यादवले नेता नेपालसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेको र विस्तृत विवरण दिउँसो जानकारी गराउने बताए।
Previous articleरोकिराखेको मोटरसाइकल माथि भेटियो एक पुरुषको श*व
Next articleझापामा माइतबाट घर गएको ३ घण्टा नबित्दै मि’र्त भेटिइन् (हेर्नुहोस् भिडियो)